Cali Geedi isma baddalo miyaa? | KEYDMEDIA ONLINE
Cali Geedi isma baddalo miyaa?
Ra’iisul Wasaarihii Soomaaliya xilligii Dowladdii ku meel-gaarka ahayd ee uu Madaxweynaha ka ahaa Cabdullahi Yuusuf, Cali Maxamed Geedi ayaa sidii looga bartay mucaaradka ku qaaday weerar afka ah.
MUQDISHO, Soomaaliya - Cali Maxamed Geedi oo ka mid ah shaqsiyaadka ay huteellada Muqdisho dajisay Dowladda uu waqtigeeda dhamaaday ee Farmaajo hoggaamiyo ayaa Siyaasiyiinta Mucaaradka ku eedeeyay in ay abaabulayaan Bannan-bax rabshadeed oo nabadda ka fog.
Cali Geedi oo iska dhigaya shaqsi nadiif ah oo aan danbi ka galin shacabka Soomaaliyeed ayaa isagoo ka hadlaya dibad-baxa jimcaha bartiisa Facebook ku soo qoray, “Dalkaan iyo dadkaan Soomaaliyeed cid rabshado ku samayn karta ma jirto oo waxaan heegan ah hay'ado amni oo ummadda u adeega”.
Cali Geedi waxaa lagu xasuustaa xasuuqii uu Xamar ka geystay 2007, markii ay dalka soo galiyeen ciidamada Xabashida isaga iyo Cabdullaahi Yuusuf.
Waxaa meel ugu qoran oo aan waayihiisa ka tirmi doonin amarkii uu bixiyay ee ahaa in laga guuro 10 Kiiloo-mitir oo ka tirsan xaafadaha Muqdisho, Warshadda Caanaha ilaa Warshadda Baastada si dhulka loola simo.
Waxaa lagu xasuustaa amarkii ka soo baxay xaafiiskiisa ee Hay’adaha Gargaarka loogu diiday in ay u gurmadaan dadkii ku tabaaleysnaa Ceelasha-biyaha ee uu Xamar ka soo qixiyay.
Waxaan duugoobin oo dadka reer Muqdisho meel ugu qoran ciidamadii Dhafoor-qiiq ee isaga iyo taliskiisii ka keeneen Puntland si ay u boobaan hantidii taallay Suuqa Bakaaraha, dilaanna qofkii ay doonaan.
Intaas iyo ka daran Cali Maxamed Geedi wuxuu ku sameeyay shacabka Muqdisho, si uu kursiga ugu haayo Cabdullaahi Yuusuf oo dhiigga shacabka ku dul dhaanteynayay.
Dhowr iyo tobon sano kadib, wuxuu u bira-tumayaa Farmaajo oo waqtigiisii dhamaaday si uu sharci darro dalka ugu siii maamulo, wuxuuna wuxuush aan waxba garan ku tilmaamayaa Madax-weynayaashii saxay wixii uu qalday.
Cali Geeddi qoraalkiisa oo aannan soo wada qaadan wuxaa ka muuqda isku dir uu laamaha amniga iyo Maamulka Gobolka Banaadir ugu yeerayo in ay carqaladeeyaan Mudaharaadka, wuxuuna doonayaa in bannaan-baxa Jimcaha uu ka dhasho isku dhac dhex mara Mucaaradka iyo Rajiimka uu waqtigu ka dhaamaday ee Farmaajo hoggaamiyo.
Dhowr iyo tobon sano kadib is ma baddalin Geeddi, wuxuuna wali u taag hayaa dagaallo iyo dirir ka dhacda Muqdisho taas oo uu ka macaashay 2007, hadana lagu maalgaliyo inuu ku hadaaqo hadallo loo soo dhiibay.